हिमाल खबरपत्रिका | अडानका शरणार्थी डाक्टर
अडानका शरणार्थी डाक्टर
दुई दशकसम्म शरणार्थीदेखि स्थानीयसम्मलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिएका भूटानी शरणार्थी डा. भम्पा राई आफैं थलिंदासम्म पनि स–सम्मान स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने अडानमा छन्।
उमेरले ७० टेकेका डा. राईको स्वर अहिले पूरै मलिन र निराश बनेको छ । सधैं दह्रो आडभरोसा दिने श्रीमती उर्मिला दुवै मिर्गौला बिग्रिएर सातामा दुईपटक डायालिसिस गराउनुपर्ने अवस्था सहिरहेकी छन् । नेपाल सरकारले गरेको निःशुल्क डायालिसिसको सुविधा भूटानी शरणार्थी भएकोले उनले पाइनन् । आजीवन अरूको उपचार गरेका डा. राई आफैं पनि आन्द्रामा रक्तस्राव हुने समस्याले ग्रस्त छन् । ओखतीमुलोको लागि दुवै जना युरोप–अमेरिका पुनर्वास गएका भूटानी र नेपाली समुदायको सहयोगमा निर्भर छन् । डा. राई सहयोग पठाउनेहरूप्रति जति कृतज्ञ छन्, बोली नआउने दिदी फूलमायाका आखिरी दिनहरू कस्ता होलान् भनेर उत्तिकै चिन्तित छन् ।
खुशी बाँड्न र दुःख सुनाउन चाहिने नर–नाताहरू वरपर छैनन् । भाइ बलराजको परिवार अमेरिका पुनर्वास भएको सात वर्ष भइसक्यो । विकसित देशहरूमा पुनर्वास भएका भूटानी, विदेशी शोधकर्ता र स्थानीयहरू भने भेट गर्न आइरहन्छन् । भूटानी र नेपाली समाजमा डा. राईले पुर्‍याएको योगदानको लेखाजोखा गर्न गत साता पनि दुई जना अमेरिकी शोधार्थी पेन्सिलभेनियाबाट दमक आएका थिए । तिनलाई अन्त्यमा क्लान्त डा. राईले भने, “उता गएकाहरूले दुःख पाएको सुन्न नपरोस् !”
गएको दुई दशकमा मैले कैयौं पटक भेटेका भव्य व्यक्तित्व डा. भम्पा राई यसपालि निकै गलेका थिए । गत साता दमक–८ स्थित डेरामा एकघण्टा गपिंmदा उनी पटक–पटक भावुक भए । ‘एक जनाले बोले पनि सत्य अल्पमतमा पर्दैन’ भन्दै औंला उठाउँदा चाहिं उनको स्वर पहिलेकै जस्तो कडा बन्यो । उनी सन् १९९० पछिका वर्षहरूमा भूटानबाट लखेटिएका शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ती समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । एक जना भए पनि भूटानी शरणार्थीले ससम्मान मातृभूमि फिर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा उनी अडिग छन् । त्यही अडानले उनले तेस्रो देश पुनर्वास अस्वीकार गरे ।
डा. भम्पा राई उनको क्लिनिकमा सधैं भूटानको राष्ट्रिय झण्डा हुन्छ (केही वर्षअघि लिइएका तस्वीर) ।
१९९२ मा दक्षिणी भूटानका ल्होत्साम्पा (नेपाली भाषी) शरणार्थीसँगै सपरिवार पुख्र्यौली देश नेपाल पसेका डा. राईले करीब एक वर्ष झापाको सुरुङ्गामा बिताए । भारत र बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा लिएका उनी राजधानी थिम्पूमा कहलिएका ‘फिजिसियन’ थिए । राजपरिवारका सदस्य र नातेदारहरू उनीसँग जँचाउन आउँथे । त्यो बेला आफ्नो ‘मूल’ माथि भएको सरकारी दमनलाई बेवास्ता गरेको भए डा. राई भूटानमा ‘रोयल फिजिसियन’ को सम्मान पाउने लाइनमा थिए । तर, उनले विरोधको बाटो रोजे । त्यो निर्णयले सुख–सुविधा खोसेकोमा उनलाई गर्व छ । “दुःखको कुरा एउटै छ” उनी भन्छन्, “अत्याचार गर्नेहरू सधैं कुर्सीमा छन्, सहनेहरू संसारमा हराउँदैछन् ।”